काठमाडौं, २५ फागुन। आज ८ मार्च अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस। यस दिनलाई विश्वभर महिला दिवस भनेर पनि मनाइन्छ। महिला अधिकार, महिला सशक्तिकरण र समानता आदि सवालहरू अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका विषयहरू हुने गरेका छन्। राजनीतिक तबरबाट शुरु भएको यो दिवस सर्वप्रथम १९०९ फेब्रुवरी२ ८ मा मनाइएको थियो। १९१० मा महिलाहरूलाई मत हाल्ने अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय दर्जा प्रदान गरिएको थियो।
सन् २०२० मा आइपुग्दा विश्वभर १ सय १० औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाइँदैछ। मार्च आठ विश्वभरिका महिलाहरुका लागि विशेष दिन हो। नेपालको महिला आन्दोलनको अवस्था के छ, महिला आन्दोलनका उपलब्धी र चुनौती के–कस्ता छन् ? यसै विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले तीन दशकदेखि महिला आन्दोलनको नेतृत्व गरेकी नेकपाकी केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व सामान्य प्रशासनमन्त्री एवं नेकपा नेतृ रेखा शर्मासँग कुराकानी गरेका छौं। प्रस्तुत छ लोकपाटीका सुजिता हमालले गरेको संक्षिप्त कुराकानी।
श्रमिक महिला दिवस कसरी मनाउँदै आउनुभएको छ ?
अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस विभिन्न तरिकाले मनाउँदै आएका छौं। राजनीतिक गर्ने, नगर्ने नेपालको महिला दिवसलाई सचेत महिलाहरुले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनसँग जोडेर मनाउँदै आएका छौं। यसलाई महिलाका राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार र समानताको प्रतीक दिवसका रुपमा मनाउने गरेका छौं।
श्रमिक महिला दिवस किन आवश्यक छ ?
पछिल्लो समयमा हासिलल गरेका केही उपल्ब्धीलाई रक्षा र कार्यान्वयन गर्दै थप उपल्ब्धीका लागि फेरि पनि संघर्ष, एकता, रुपान्तरणका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाउन आवश्यक छ। ८ मार्चको दिन संघर्षको इतिहास, प्रतिफलको इतिहास गाँसिएको छ। त्यसैले यो दिन आफैमा गौरवपूर्ण र महान दिन भएको हुनाले श्रमिक महिला दिवस मनाउन आवश्यक छ।
नेपालको महिला आन्दोलन कहाँ पुग्यो, कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?
संवैधानिक र राजनीतिक रुपमा पनि महिलाहरु हिजोको तुलनामा अगाडि आएका छन््। मौलिक हकमा थुपै कुराहरुको व्यवस्था गरिएको छ। सम्पत्तिमाथि दम्पत्तिको समान अधिकारको कुराहरु पनि संविधानमा उल्लेख गरिएको छ। लैंगिक विभेदमुक्त समाजको परिकल्पना गरिएको छ। बिगतको तुलनामा संवैधानिक रुपमा महिलाहरु अगाडि आएका छन्।
यद्यपि, हाम्रो लडाइँ आंशिक अधिकारको होइन, पूर्ण समानताको हो, न्याय र स्वतन्त्रताको हो। यसका लागि हाम्रो सङ्घर्ष निरन्तर जारी रहन्छ। प्राप्त अधिकारको संरक्षण गर्दै बाँकी अधिकार प्राप्तिको दिशामा हामी निरन्तर सङ्घर्ष गर्छौं।
संविधान र कानूनमा लेखेका कुराहरु व्यवहारमा कार्यान्वयन भएका छन् त ?
संवैधानिक र कानूनी रुपमा लेखेका कुराहरु व्यवहारिक र कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। ती कुराहरुलाई व्यवहारिक कार्यान्वन गर्ने र थप उपल्ब्धीका निम्ति संघर्ष गर्ने चरणमा छौं। महिलाहरुले पनि भोट हाल्न पाउनुपर्छ भनेर संघर्ष गरेको यो अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस आज आएर बराबरीको हिस्सामा जानुपर्छ भनेर चेतनाको विकास भएको छ।
राज्यको हरेक निकायमा एक तिहाई महिलाको उपस्थिति हुनु पर्ने भनेर संवैधानिक व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था गरिसकिएको छ तर, पूर्ण समानताका लागि अगाडि बढिएको छ। तर, हामीले पूर्ण अधिकार पाएका छैनौं। आजको दिनले थप अधिकारका लागि सङ्घर्ष गर्न पनि प्रेरित गर्नेछ।
ईमेल: lok[email protected]